ओली क्याबिनेटमा कुन नेताको योग्यता कति? – Everest Dainik – News from Nepal
ओली क्याबिनेटमा कुन नेताको योग्यता कति?
काठमाडौं, असार २१ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पीएचडी गर्ने डाक्टरदेखि माध्यमिक तहसम्मको मात्र अध्ययन गरेका नेता सहभागी छन्। कुल २४ जनाको क्याबिनेटमा दुईजनाले पीएचडी, ६ जनाले स्नातकोत्तर, ९ जनाले स्नातक, ४ जनाले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह र तीनजनाले माध्यमिक तहको शिक्षामात्र अध्ययन गरेका छन्।